Maraykanku haka noqdo cunaqabataynta uu saaray Eritariya iyo hanjabaada: Itoobiya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dawlada dhexe ee Itoobiya ayaa camvbaaraysay cunaqataynta Maraykanku ku soo rogey Eritariya asagoo taageere u haya kooxda Tigreega iyo weliba hanjabaadiisa milatari ee uu leeyahay waxaan sugaynaa amar.
”Eritariya haddii dal ka cabanayo waxay ahayd inaan anagu ka cabano oo ay joogeen dalkooda kadib markii kooxda falaagada Tigree ay gantaalo ku garaacday dalkooda ayaa lagu yiri qoraal.
”Ma garan karno waxa dal sadexaad uu u soo farogeliyo oo aan shaqo ku lahayn arimaha geeska ayaa la raaciyay qoraalka. Dhinaca kale sarkaal u hadlay Marayanka ayaa ku hanjabay inay Itoobiya keenayaan ciidamo.
Masuul u hadlay Itoobiya ayaa cambaareeyay hanjabaada iyo farogelinta ka imaanaysa Maraykanka ee ku wajahan dal xora. Waa markii ugu horeysay ee Maraykanku is cadeeyo inuu rabo inuu milatari ahaan ku taageero Tigree.